Inrico TM-8 Yakashata Audio Rongedza - mod nyowani - Network Radios
kubudikidza CT1EIZ (DMR TGIF Prime TG128)
$0.00 0 zvinhu
musha / Amateur Radio / Inrico TM-8 Yakashata Audio Rongedza - mod nyowani
Inrico TM-8 Yakashata Audio Rongedza - mod nyowani
Amateur Radio, Zello kushanda
Heino apa nadzurudzo yakanaka iyo inovandudza Inrico TM-8 Audio muzvikamu zvekare. Chinyorwa ichi chakanyorwa naM0FXB.
Steve Jobs mupiro kuNetwork Radios
Ndiani anowanikwa pane IRN?
CheroTone AT-D878UVII Uyezve
DMR Nhepfenyuro (10)
Mobile Network maRadio (8)
Network maRadio (32)
Mobile Network maRadio
Nharembozha dzaishandisa kuenderana
Yese network yedu maredhiyo anoshanda nevashandi veGMM. MuUSA, ivo vanongoshanda chete neAT&T (3G uye 4G) uye T-Mobile (3G). Ziva kuti AT&T ichatenga chero chibvumirano chaungave uine nevamwe vanoshanda, kuti iwe ugone kushandura anotakura. Mawairesi achashanda zvakare kuwana chero yeWiFi hotspot.
Tsamba kune vatengi vangu
Rimwe zuva ini ndaive ndakatarisa online kana paine chero hunyanzvi hwekugadzirisa kubva kunetseka kana chimwe chinhu chikatadza nemutengi Kufanana nepakeji inononoka kana aa mutengesi akakanganisa ndokuitumira kukero isiriyo. Ini ndaida kukwanisa kurara husiku uye kugona kurara ndisingafunge nezvaJason uyo akamirira ake mawairesi matatu uye haana kuagamuchira izvozvi kana Tomas uyo akawana akaremara T3s. Ini ndaingoda kusiya "kwavo" matambudziko parutivi uye kunakidzwa nenguva yangu yekusununguka ndisingafunge nezve "yavo" nyaya. Mushure mezvose, zvese zvinogona kugadziriswa. Iwe unonyora email kukumbira ruregerero, edza kuronga kutumira kutsva, kutsiva unit pano neapo, kuburitsa mari diki uye zvese zvinofamba zvakanaka.
Asi ndakazoona kuti handifanire kuenda nenzira iyoyo. Ingozi huru kana ndikave "bhizimusi" murume bhizinesi Uku ndiko kugara kunzwira tsitsi nevatengi kunonditsanangudza sehunyanzvi uye semuridzi webhizinesi. Ndiro shuwiro yangu pabasa iri rinozvishandura rikava hobho. Kana ndikasanzwa kurwadziwa kunonzwa vatengi vangu kana chimwe chinhu chikatadza kufamba, saka bhizinesi rangu harife rakabudirira.
Chisarudzo ichi chinondiratidza kuti kunzwira tsitsi vatengi, kuendesa kwese kushingairira kwangu kwechokwadi mumabasa angu ese ebhizinesi kuchapedzisira kwaita kuti munhu wese anzwe zvishoma zverudo irworwo pavanosangana nebhizinesi rangu.
Nezve izvo, ndinokutendai mose uye ndichagara ndichionga nekuvimba!
Kana iwe ukawana mufaro nemawairesi awakatenga neni, saka iwe wakangoita zuva rangu!
Brandmeister uye TGIF panguva imwe chete paGo
Boxchip S700A Analog / DMR Vhidhiyo Ongororo
Teerera kune Network Network Live Channel
Maitiro ekuronga maBoxchip S700A DMR frequency
Maitiro ekugadzirisa iyo Boxchip S700A Boxchip yeDMR kushanda
Zvepamusoro zvakatemerwa zvigadzirwa
Handheld Mutauri Microphone yeRadio-Tone RT4
Inrico T298s 3G / Wifi UHF Radio 400-470 MHz (Android yakavhurwa) EU / UK / Australia
Inrico T298s 3G / Wifi VHF Radio 137-174 MHz (Android yakavhurwa) EU / UK / Australia
Talkpod N58 3G / WiFi (Android yakavhurwa)
Desktop charger / Suction Mukombe Gomo reRT4
Ed Koorengevel on Desktop charger / Suction Mukombe Gomo reRT4
mb60304 on Radio Tone RT4 4G / LTE WiFi + Yakabata Maikorofoni + Yakawedzera Bhatiri
Yepamutemo RFinder shopu Yepamutemo Inrico shopu
Pasi rese zvinokurumidza kuendesa
PTT4U inyika-ye-ye-yehunyanzvi network nhepfenyuro sevhisi yehunyanzvi. Kuvimba nechiratidzo cheGSM, mawairesi edu achakwanisa kutaura kune mumwe nemumwe pasina chero ganhuriro. Radiyo yega yega inoshanda neSIM kadhi (isina kubatanidzwa) uye inoshandisa GSM / 3G / 4G uye mamwe mamodheru anotoshanda neiyo WiFi chiratidzo. Izvi zvinoreva haufanire kushandisa mari yakawanda pane anodhura redhiyo infra-zvivakwa, anodzokorora, maantena kana saiti renzvimbo. Yese network network infra-chimiro chinopihwa neye GSM inotakura. Yakavanzika uye yeboka mafoni anowanikwa. Nhengo dzechikwata chako dzinogona kunge dziri munyika dzakasiyana uye dzichiri kusvika. Mushandisi wega wega anogona kutarisa nzvimbo yemumwe nemumwe (zvichibva paprofile yavo), tumira mameseji uye SOS yambiro. Zvese zvaunoda kuti uite, kutenga maratidziro enetiweki, zvinoenderana nezvaunoda, isa yako yaunofarira mutakuri SIM kadhi pamawairesi (chirongwa chepamwedzi che data che500MB chichava chakakwana) uye Nyorera gore rega PTT4U sevhisi. Iwe unozoda gore rimwe chete $ 49 kunyoreswa kune imwe nhepfenyuro. Uye ndizvozvo! Hapasisina kutemwa nemusoro.
12759 NE Whitaker Nzira, # P888
Nhare: + 1 503 746 8282
© 2021 Network-radios.com kodzero dzose dzakachengetedzwa
Takatapudza mitengo yedu yese. Campaign inoshanda nhasi! Dzinga